Gent-Wevelgem ပွဲမှာ Peter Sagan တကယ်နုိုင်ပါပြီ...။ ~ Htet Aung Kyaw
The curse of the rainbow jersey is over!!!
(ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အကျီရဲ့ ကျိန်စာ ဒီနေ့ ပြီုးုဆုံးသွားပါပြီ.)။
ဘလဂျီယံမှာ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ နာမည်ကြီး Spring Classics ပွဲ Gent-Wevelgem မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Peter Sagan (Tinkoff) တကယ်နုိုင်သွားပါ ပြီ။
တကယ်နုိုင်တယ်လုို့ပြောရတာက ၂၀၁၅ နှောင်းပုိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အကျီရ ပြီးကတည်းက ပထမ တခါမှမရသေးပဲ ဒုတိယချည်းရနေလုို့ အခုလုို ခေါင်းစဉ် တပ်ရတာပါ။
243km ရှည်လျားပြီး ပြင်သစ်နဲ့ ဘလဂျီယံနယ်စပ်ရှိ တောင်ကုန်းတွေ၊ ကျောက်တုံးခင်းလမ်းတွေပေါ်ဖြတ်စီးရတဲ့ပွဲ၊ မုိုးရွာ၊ လေပြင်းကြား ဖြတ်စီး ရတဲ့ဒီပွဲမှာ ပထမ ရဖုို့ဆုိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဆာဂန်ကုိုယ်တုိုင်ကလည် ဒီပွဲ မှာ ပထမ ရဖုို့မလွယ်ဘူးလုို့ ပွဲမစခင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆာဂန်နဲ့ ကာစီးလာလာအပါဝင် ထိပ်တန်းနာမည်ကြီးတွေဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၄၀ ခန့်အလုိုမှာ အုပ်စုထဲကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် လာပါတယ်။ နောက်ပုိုင်းမှာတော့ ၄ ဦးတည်း ထပ်မံထွက်ပြေးနုိုင်ပြီး ပန်းဝင် ချိန်ကျမှ အကြိတ်အနယ် စပရင့်တင်ရင်း ဆာဂန် ရသွားတာပါ။
ပန်းဝင်စာရင်း ၁-၁၀ ကတော့...
6 Fernando Gaviria (Col) Etixx - Quick-Step
10 Michael Morkov (Den) Team Katusha ဖြစ်ပါတယ်။
(သတင်းအသေးစိပ်ကုို အရင် Live တင်ထားတဲ့ ပုို့စ်မှာ ဖတ်နုိုင်ပါတယ်)။
Gent-Wevelgem ပွဲ LIVE ဖတ်နုိုင်ပြီ။ ဘယ်သူအနုိုင်ရမယ်ထင်သလဲ...
Peter Sagan (Tinkoff) အနုိုင်ရသွားပြီ...။
နာမည်ကြီးလှတဲ့ Spring Classics ပွဲတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ Gent-Wevelgem ပွဲ ဘလဂျီယံမှာ စတင် ကျင်းပနေပါပြီ။ ပြိးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ E3 Harelbeke ပွဲမှာ ၀င်စီးသူအားလုံး ဒီပွဲမှာ ဆက်ပြိုင် ကြပါတယ်။
မနှစ်ကနဲ့စာရင် ပြိုင်ပွဲလမ်းကုို 243km အထိ ရှည်အောင်ဆွဲဆန့်လုိုက်တဲ့ အပြင် 65km အတွင်း တောင်ကုန်း ၁၀ ခုထပ်တုိုးထည့်ထားတဲ့အတွက် တာတုိုဘုရင်တွေနဲ့စာရင် တကုိုယ်တော်ထွက်ပြေးနုိုင်သူတွေအတွက် အလား အလာပိုကောင်းနုိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပီတာဆာဂန်က ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ဝင်လာတဲ့သတင်းတွေအရတော့ နာမည်ကြီး တာတုိုဘုရင်တဦးဖြစ်သူ Alexander Kristoff ဟာ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဒီနေ့ပွဲကုို ၀င်မစီး တာ့ဘူးလုို့သိရပါတယ်။ အလားတူ Team Sky မှ Ian Stannard ကလည်း နေမကောင်းဖြစ်လုို့ ဒီနေ့ မစီးနုိုင်ဘူးလုို့ သိရပါတယ်။
အခုပွဲကုို စတင်တာလွှတ်ဖုို့ပြင်နေပြီး Gent မြို့ပြင်နားက Deinze မှာ စက်ဘီး သမားတွေ တာမထွက်ခင် တဦးချင်းလက်မှတ်ထုိုးနေကြပါတယ်.။ ရာသီဥတုက နည်းနည်းအေးပေမဲ့ နေသာနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ် ဘရာဆဲမှာ ဗုံးခွဲတုိုက်ခုိုက်ခံရလုို့ လုံခြုံရေးတုိုး ထားပေမဲ့ ပွဲပရိသတ်တွေကတော့ လမ်းပေါ်ထွက်လာနေကြပါပြီ...။
စက်ဘီးပွဲတွေကို အသေအချာထုိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ Classics ပွဲနဲ့ သာမန် ၇ ရက်ပွဲတွေကြား မတူကွဲပြားတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ နည်းစနစ်တွေကို နဲနဲသိလာသလုိုလုို။ Classics ပွဲတွေဟာ သာမန်ပွဲတွေထက် ပုိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ဆုိုရင် စာဖတ်သူ ဘယ်လုိုသဘောရသလဲ။
မနေ့က စပိန်ပွဲမှာ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၆၀ လောက်အလုိုကျမှ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ဖမ်းမိသွားတာ စိတ် လှုပ်ရှားဖုို့ကောင်းတာနဲ့ သောကြာနေ့ကပွဲမှာ ဆာဂန်တုို့ ၂ ဦးပြေးနေတာကုို နောက်က အုပ်စု မကြာခင်မိလိမ့်မယ်ဆုိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဘာကွာသလဲ...။
ကျနော့်အတွက်တော့ Classics က အတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖုို့ကောင်းပြီး ဘယ်သူနုိုင်မလဲဆုို တာ ဘယ်လုိုမှကြိုမပြောနုိုင်တဲ့အနေအထားပါ။
တာလွှတ်ပြီ။ စက်ဘီးသမားတွေဟာ ပြင်သစ်နယ်မြေထဲရှိ Tielt မြုိုံဆီ ဥိးတည်နေပြီး အဲဒီက မှတဆင့် ဘလဂျီယံထဲပြန်ဝင်ကာ ကမ်းခြေတလျောက်စီးပြီးရင် တောင် စတက်ရဖုို့ရှိနေ ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အမျိုးသမီးပွဲကုိုလည်းစတင်နေပြီး ၁၁၂ ကီလုိုမီတာရှိပါတယ်။
တာထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ၄ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးသွားတာ စက္ကန့် ၃၀ ကျော်အထိ လွတ်သွားပါပြီ။ အဲဒီ ၄ ဦးကတော့ (Pavel Brutt -the instigator, Lieuwe Westra, Jonas Rickaert and Josef Cerny) တုို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ပွဲစပြီး ၁၀ ကိလုို အကျော်မှာ Gap က တမီနစ်ကျော်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။
Wow! ၂၅ ကီလုိုခန့်စီးပြီးတဲ့အချိန်မှာ gap က 8:40 မီနစ်အထိ ရှိသွားပြီတဲ့။ Peloton က ကီလုို ၅၀ စီးပြီးတဲ့အထိ အရှိန်မတင်ရင်တော့ ပြန်ဖမ်းမိဖုို့ လွယ်ပါ့ဦးမလားမသိ...။
178km remaining from 243km မှာ the break က 11:00. မိနစ်အထိ ပြတ်သွားပြီဖြစ်။
အခု feed zone ကိုရောက်နေ။ ရာသီဥတုက အချိန်ထိသာယာနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ပန်းဝင်ချိန်မှာ မုိုးရွာ။ လေပြင်းတုိုက်နုိုင်ဟု ခန့်မှန်းထား။ ...အစီရင်ခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ Peloton ဟာ ၃ စု ကွဲသွားပြီလုို့သိရပါတယ်။ အဓိပါယ်က နာမည်ကြီးတွေရှေ့ထွက်ပြီး ရှေ့ပြေးအုပ်စုကို အမီလုိုက်တော့မယ်ဆုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
တပြိုင်တည်းမှာပဲ စပိန်နုိုင်ငံ ဘာစီလုိုးနားမှာကျင်းပနေတဲ့ Catalunya ပွဲလည်း အကြိတ် အနယ်ပြိုင်နေပြီး ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၇ ကီလုိုသာလုို။ ဖရူနဲ့ ဖရိုးတုို့ ထွက်ပြေးဖုို့ကြိုးစားနေ။ ဖရူဟာ GC ၁၀ စာရင်းအပြင်ကိုရောက်နေပေမဲ့ ပ အုပ်ကုိုသာမီသွားရင် ၁ မီနစ်ကျော်ပြတ်နုိုင်တာ ကြောင့် GC ပထမ ရသွားနုိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်တားနား၊ ကွန်ဒါတုို့ အသဲအသန် လုိုက်နေ...။(အဲဒီပွဲကို Euro Sport TV က အခု Live ပြနေ)။
peloton ထဲက ထွက်ပြေးလာတဲ့ ပ အုပ်နဲ့ ဒုအုပ်ကြား စက္ကန့် ၂၀ ခန့်ပြတ်သွားပြီဖြစ်။ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့ကတော့ ၁၀ မီနစ်ခန့်အသာနဲ့ ဆက်ပြေးနေဆဲ...။
peloton ထဲက ထွက်ပြေးလာတဲ့ ပ အုပ်စုထဲမှာ နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Boonen, Van Avermaet, Sagan, Boasson Hagen, Cancellara, Demare and Benoot တုို့ပါဝင်။ ဒါကြောင့် ဒီအုပ်စုကုို အလေးထားစောင့်ကြည့်ဖုို့လုို....။
ဘာစီလုိုနားက Catalunya ပွဲ ပန်းဝင်သွားပါပြီ။ ၇ ရက်ပေါင်းအတွက် အပြောင်းအလဲမရှိပဲ ကင်တားနားကပဲ ၇ စက္ကန့်အသာနဲ့ ကွန်ဒါတာကုိုဖြတ်ပြီး ပထမ ရသွားပါပြီ။ ဒီနေ့အတွက် တော့ Alexey Tsatevich (Katusha) နဲ့ Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) တုို့က ပ-ဒု ရသွားပြီ။
မကြာခင် မီနစ်ပုိုင်းအတွင်း Euro Sport TV ကနေ ဒီ Classics ပွဲကို Live ပြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရ...။ (ခန့်မှန်းချက် မှားသွားပါတယ်။ အခု Live ၀င်လာတဲ့ ပြကွက်က ကျနော် အစီရင်ခံနေတဲ့ ဘလဂျီယံ ကလစစ်မဟုတ်သေးပဲ ပြင်သစ်ပုိုင် မြေထဲပင်လယ်ထဲက ကျွန်း Corsica မှာ ၃ ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ Critérium International ပွဲဖြစ်နေပါတယ်)။
131km remaining from 243km မှာ နာမည်ကြီးအုပ်စုက အရှိန် နင်းကန်တင်လာတဲ့ အတွက် ရှေ့ပြေးအုပ်စုကိုမီဖုို့ ၃ မီနစ်ခန့်သာလုို။ တ အုပ်စုက တမီနစ်နောက်ကျနဲ့လုိုက်နေ။
(ဒီစာမျက်နှာ ကန့်သန်စာလုံးရေ အတော်များနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန် ကိလုို ၁၀၀ ၀န်းကျင် အခြေအနေကုို အောက်က Comment လင့်ခ်အတွင်း တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း...)။
Gent-Wevelgem ပွဲ ဘယ်သူ အနုိုင်ရနုိုင်သလဲ...
(Peter Sagan (Tinkoff) အနုိုင်ရသွားပြီ)
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ E3 Harelbeke ပွဲလုိုပဲ နာမည်ကြီး လှတဲ့ Spring Classics နောက်တပွဲ ဒီနေ့ (တနင်္ဂနွေ) ဘလဂျီယံမှာ ကျင်းပဖုို့ရှိနေ ပါတယ်။
ဒီနေ့စတင်မဲ့ Gent-Wevelgem ပွဲဟာ E3 Harelbeke ပွဲထက် ပုိုစီးရခက်ဘွယ်ရှိပြီး တာတုို ဘုရင်တွေနဲ့စာရင် တကုိုယ်တော် ထွက်ပြေးနုိုင်သူတွေအတွက် အလားအလာပုိုကောင်းနုိုင် တယ်။ သူ ပထမ ရဖုို့ အလားအလာ ပုိုနည်းတယ်လုို့ သောကြာနေ့ပွဲတုန်းက ဒုတိယ ဖြစ်သွား တဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပီတာဆာဂန်ကပြောပါတယ်။
(အပေါ်က ဘီးပုံများမှာ ပီတာဆာဂန်ရဲ့ Spring Classics အတွက် အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဘီးဖြစ်ပါတယ်)။
ဒီပွဲကုို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက ဆာဂန် ပထမ ရဖူးပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ လမ်းကုို 243km အထိ ရှည်အောင်ဆွဲဆန့်လုိုက်တဲ့အပြင် 65km အတွင်း တောင်ကုန်း ၁၀ ခုထပ်တုိုးထည့်ထားတယ် လုို့လဲသိရပါတယ်။
အသင်းဖေါ် ၄-၅ ဦးပါတဲ့ အသင်းတသင်းကသာ တောင်ကုန်းတက်မှာ လွတ်သွားမယ်ဆုိုရင် အဲဒီအသင်းကို မိအောင်ပြန်ဖမ်းဖုို့ခက်သွားနုိုင်တယ်လို့ ဆာဂန်ကဆုိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ရာသီ ဥတုနဲ့လေတုိုက်နှုန်းကလည်း ပွဲရဲ့ရလာဒ်ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေနုိုင်ပါတယ်။
အခြေအနေဟာ နောက်ဆုံးမီနစ်မှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကလုို မျိုး ဖြစ်ဖုို့ သူမျှော်လင့်ပါတယ်လုို့လဲ ဆာဂန်ကဆုိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှေ့မှာသူပြောခဲ့တဲ့အတုိုင်း ဒီပွဲမှာ သူရဖုို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဟုိုနေ့က ချိန်းကြိုးကျလုို့ ဒုက္ခ များသွားတဲ့ ကာစီးလာလားကလည်း ဒီနေ့ပွဲမှာ ရအောင်စီးဖုို့ ရှိနေပါတယ်။ တခါ ဆာဂန်ရဲ့ မဟာပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ Alexander Kristoff, Tom Boonen, Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Tony Martin, Nacer Bouhanni အပါဝင် ကမ္ဘာကျော်စက်ဘီးသမား ၁၀၀ ကျော် ၀င်ပြိုင်မှာမုို့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။